महासंघको दुरुपयोग गर्नेलाई आउट गर्न हाम्रो समूह विजय हुन्छ: सौरभ ज्योति :: Setopati
महासंघको दुरुपयोग गर्नेलाई आउट गर्न हाम्रो समूह विजय हुन्छ: सौरभ ज्योति
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारणसभा तथा चुनाव यही मंसिरमा हुने मिति तय भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण गएको चैतमा हुनुपर्ने चुनाव दुई पटक सरिसकेको छ। व्यावसायिक गतिविधिमा व्यस्त हुने व्यवसायीहरुले गएको एक वर्षदेखि चुनावी गतिविधिमा लागिरहेका छन्।
यही साधारणसभाबाट हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा अध्यक्ष हुने छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि भने दुई प्यानल बनाएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन्। चन्द्र ढकाल र किशोर प्रधानले प्यानल बनाइसकेका छन्। यस्तै चुनावी गतिविधि के कस्तो भइरहेको छ। चुनावमा कस्ता एजेन्डहरु उठ्लान्? यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर सेतोपाटीका लागि रवीन्द्र शाहीले महासंघको आगामी नेतृत्वमा एशोसिएटको तर्फबाट उपाध्यक्षका उम्मेद्वारी दिएका व्यवसायी सौरभ ज्योतिसँग लिएको अन्तर्वार्ताको संपादित अंश:
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनाव यो पटक लामै समय लाग्यो। गएको एक वर्षदेखि व्यवसायीहरु एउटै चुनावलाई नै केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेका हिडिरहेका छन्। महासंघ महामारीमा पनि चुनाव केन्द्रित मात्र भएको हो?
प्रत्येक चुनावमा हाम्रो सक्रियता बढ्ने गर्छ। यो पटक पनि बढ्यो। सम्भवत: हाम्रो महासंघको इतिहासमै सबैभन्दा लामो समयसम्म चल्ने देखियो। कोभिडका कारण दुई पटक सारिसक्यो। अब आएर मंसिरमा हुने निश्चित भएको छ। यसै कारणले हामी सबै लागिरहेका छौं।
तर यति भनेर चुनावमा मात्र लागिरहेका छैनौं। हामीले आफ्नो काम पनि गरिरहेका छौं। म अहिले पनि महासंघको जिम्मेवारीमा छु। अरु साथीहरु पनि त्यस्तै हो। निजी क्षेत्रका सदस्यहरुको हकहितका लागि गर्नुपर्ने कामलाई हामीले निरन्तरता दिइरहेका छौं। चुनावका कारणले हाम्रो काम रोकिएको छैन।
कोभिडका कारणले गर्दा थला परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि हामीले निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौं। म आफै पनि मौद्रिक नीतिमा पैरवी गर्ने जिम्मेवारी छ। त्यसमा पनि म आफैले पहल गरेर काम गरिरहेको छु। चुनाव एकातिर छ भने काम पनि भइरहेको छ।
तपाइलाई व्यक्तिगतरुपमा चुनाव कस्तो लागिरहेको छ?
करिब १८ महिनादेखि यो चुनावमा लागिरहेको छ। तर म तीन वर्ष अघि नै चुनावमा लागेको थिए। त्यतिबेला मैले उपाध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिने निर्णय गरेको थिए। त्यतिबेला सहमतिमै जाउ भन्ने कुरा भयो। सबै अग्रज तथा साथीहरुले टिम स्प्रिटका लागि चन्द्रजीलाई(चन्द्र ढकाल) उठाउने र म पछि आउने कुरा भयो। हामीले सहमतिमा छोडेका थियौं।
त्यतिबेला चन्द्र ढकाल जीले प्रतिबद्धतता गर्नुभएको थियो 'यो पालि मलाई सजिलै छोडिदिनुभयो र अर्को पाली तपाइलाई पूर्ण सहयोग हुने छ।'
यो पालि उहाँ वरिष्ठ वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उठ्नुभएको छ। मलाई आश छ कि उहाँ आफ्नो बचनमा टिक्नुहुने छ र मैले सहयोग पाउने छु।
तर समूह त फरक पर्‍यो त?
म समूहभन्दा पनि सोचको कुरा गर्छु। चुनावमा जहिले पनि दुई समूह त भइहाल्छ नि। त्यही सोचका कारणले गर्दा समूह छुट्टिन्छ।
हामीले जे जस्तो समूह बनाए पनि अध्यक्षलाई नै सहयोग गर्ने हो। हामीले अध्यक्षलाई सघाउनका लागि दीर्घकालिन सोच नै बनाएका छौं। आउने अध्यक्ष शेखर गोल्छाकै नेतृत्वमा १० वर्षे रोडम्याप नै बनाएका छौं। एजेन्डा निर्धारण पनि त्यहीअनुसार गरेका छौं।
चुनावमा उठ्ने सबैले काम गरेर देखाउछु त भनिहाल्छन्। तर तपाईरुले काम नै गर्ने एजेन्डा के छन्?
हामीले ३ वर्षको एजेन्डा होइन १० वर्षको योजना बनाउछौं। किन भने ३ वर्षमा धेरै केही गर्न सकिन्न पनि। समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि लगानीदेखि रोजगारीसम्म के गर्न सकिन्छ। आत्मनिर्भरता, उद्दमशिलताको विकास जस्ता हाम्रा प्राथमिकता हुन्। यो कुरा चुनावमा सबैले भन्छन्। तर हामी के भन्छौं भने हाम्रो बोलीमा नजाउ। चुनावमा सबैले राम्रो बोल्छन्।
हामीले गरेको काम त हेरिदिनुस। उमेरमा कम भएपनि काममा अरुभन्दा मेरो अनुभव छ। मैले राष्ट्रिय उत्पादन गुणस्तर परिषदमा काम गरे। त्यसपछि राष्ट्रिय एक्सिलेन्स अवार्डको सञ्चालन गरे। त्यसपछि बजेट सम्बन्धमा अर्थमन्त्रालयसँग निकटमा सहकार्यको वातावरण बनाए। राजश्व समितिको सभापति पनि भए। त्यसमा पनि मैले निजी क्षेत्रको नेतृत्व गरे। अहिले आएर बैंकिङ समितिमा छु। जति गर्नुपर्ने त्यति पुगेन होला। तर मैले इमान्दार प्रयास गरेको छु। त्यो त साथीहरुले देख्नुभएको पनि छ। त्यो ट्रयाक रेकर्डमा काम पनि देखिएकै छ। यही आधारमा मैले उम्मेद्वारी दिएको हुँ। साथीहरुले यो सबै हेरेर विजय गर्नुहुने छ भन्नेमा विश्वास्त छु।
दोस्रो कुरा हामी एक्लैले गर्ने पनि होइन। म उपाध्यक्ष भएपछि त अझै व्यस्त हुन्छु। ९ सय बढी सदस्यहरु छन्। ती सबैको समस्या समाधान गर्नका लागि मेरो १९ जनाको टिम हुने छ। त्यसमा हरेक क्षेत्रको सक्षम व्यवसाय र व्यक्तीहरु छन्।आफ्नो प्यानलको कुरा गर्दा सदस्यको पनि क्वालिटी हेर्नुपर्छ। मेरो प्यानलका साथीहरु ३ जना बाहेक अनुभवी मान्छेहरुमात्र छन्। त्यसैले म टिमको भरमा अघि बढ्ने हो। मलाई पनि सबै कुरा थाहा छैन।
त्यसपछि हामीले हरेक त्राइमासमा सबै सदस्यलाई राखेर समस्या संकलन गरेर कसरी अघि बढ्ने भन्ने रणनीति लिएर अघि बढेका छौं।
पहिले पनि गरेको र पछि पनि गर्ने प्रतिबद्धतता छ भन्नुभयो। खासमा महासंघले अहिलेसम्म गर्दै आएको काम के हो? त्यस्तो काममा सिर्जनशीलता देखाउन सक्ने ग्याप कति छ ?
महासंघ भनेको निजी क्षेत्रको छाता संगठन हो। सञ्जाल हेर्ने हो सरकारको कर कार्यालयभन्दा पनि हाम्रो ठूलो हो। कुनै सेक्टरमा सरकारको भन्दा पनि ठूलो सञ्जाल छ। त्यहीअनुसार काम पनि छ।
महासंघमा हरेकको छुट्टै जिम्मेवारी हुन्छ। यो कार्यकालमा म अहिले उपाध्यक्ष भए भने मेरो मुख्य भुमिका रोजगारदाता परिषद् हुने छ। त्यो भनेको महत्वपूर्ण कुरा हो। श्रम कानून, श्रमिकको व्यवस्थापन, व्यवसायाको हित जस्ता कुराको गम्भिर छलफल हुनुपर्छ। श्रमिकको रोजीरोटी ग्यारेन्टी पनि हुनुपर्छ र रोजगारदाता पनि बाँच्नसक्ने अवस्था हुनुपर्छ।
यसका लागि व्यवस्थापन सन्तुलित हुनुपर्छ। त्यो सन्तुलित तरीकाले सबैले जित्ने अवस्था ल्याउनका लागि ट्रेड युनियनसँग बसेर एउटा सम्झौता हुनुपर्छ। कसैलाई मारेर अरु कोही पनि जिउन त सक्दैन नि। उद्योगीको उत्पादकत्व बढ्ने र श्रमिकको सुविधा पनि बढ्ने अवस्थाका लागि वातावरण बनाउनुपर्छ।
लगानीको मुख्य आधार भनेकै श्रम ऐन हो। त्यो कस्तो छ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसमा सुधार गर्नका लागि हामीले त्रिपक्षीय छलफल गर्नुपर्ने छ। यसमा सरकार, श्रमिक र महासंघ एकै ठाउँमा हुनुपर्छ।
यस्ता काममा विश्व बैंक, श्रम संगठन, आइएफसी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने छ। हामीले डिजिटल इकनोमीको पनि पैरवी गर्छौं। यसका लागि सरकारी सेवादेखि हाम्रो व्यवसायसम्म डिजिटल उपकरण सिस्टम हुने छ। त्यसो हुँदा अनौपचारिक क्षेत्रको पनि न्यूनीकरण हुने छ। महासंघमा सबैको भुमिका हुन्छ। त्यसको केन्द्रीय नेतृत्व अध्यक्ष ज्यूले गर्नुहुने छ।
महासंघको चुनावमा यो पालि एउटा एजेन्डा डिजिटल इकनोमी हुने छ। पछिल्लो समय डिजिटल इकनोमीको छलफल भन्दा पनि कार्यान्वयनमा ठूला कर्पोरेटकै मुख्य हात हुन्छ भन्ने गरिन्छ। ठूला कर्पोरेट भनेकै त्यही आठ सय हुन् जसले महासंघदेखि अर्थतन्त्रसम्म लिड गर्छन्। यसमा तपाईहरु आफैले गर्ने हो भने पैरवी भन्दा प्रतिबद्धतता बढी चाहिने होला नि?
कोभिड-१९ को एउटा राम्रो पक्ष भनेकै यही हो। मेरा केही कम्पनी थिए। अनलाइनमा गएका थिएनन्। जव कोभिड आयो बाध्यताबस डिजिटल प्ल्याटफर्ममा जानुपर्ने भयो। यदि छैन भने ध्वस्त हुने अवस्था आयो। सर्भाइव गर्नका लागि पनि गइयो। यसले गर्दा फास्ट ट्रयाक भएको छ।
अब हामीले यसका लागि पूर्वाधार निर्माणका लागि पैरवी गर्नुपर्ने छ। अहिले नै निजी क्षेत्रले यसका लागि सहकार्य त गरिरहेकै छ। विश्वासनीय इकमर्श इकोसिस्टम निर्माणका लागि हामी आफै पनि काम गर्ने छौ। सरकारलाई पनि नीतिगत र पूर्वाधार निर्माणका लागि दबाब दिन्छौं।
कनेक्सन चाहियो देशभर, त्यो पनि भरपर्दो। नेपाल भनेको काठमाडौंमात्र होइन। गाउँगाउँमा अप्टिक फाइबर पुर्‍याउनुपर्ने छ। सीप विकास पनि हामीले गर्नुपर्छ। नयाँ सन्दर्भमा सोहीअनुसार जनशक्ति तयार पार्नुपर्ने छ। जुन प्रकारले काम गर्दै आएका थियौं। यो पाँच वर्षमा काम नै नरहने अवस्था पनि आउनसक्छ। त्यसलाई रुपान्तरण गर्नुपर्ने छ। त्यस्तो सीप बढाउने अवस्था हुनुपर्छ। यसका लागि तलदेखि माथि जानुपर्ने छ।
तपाई एशोसिएटको उपाध्यक्ष उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। जितेपछि तपईको मुख्य जिम्मेवारी नै रोजगार परिषद् हुने छ। अबको समयमा रोजगरी र जनशक्तीको कुरालाई सरकारलाई सचेत गर्ने कुरा महासंघको पनि होला। यसमा तपाइहरुले कसरी काम गर्नुहुन्छ?
यो काम ट्रेड युनियनको पनि हो। हामीलाई अबको समयमा चाहिने सीप कस्तो हो। कस्ता मान्छे चाहिन्छन्। त्यही आधारमा हामी विभिन्न शैक्षिक तथा सिपसँग सम्बन्धित संस्थामा गएर अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउनुपर्छ। सहकार्य पनि गर्नुपर्छ।
सर्भे गरेर भविष्यमा कुन टाइप अफ स्किल सेट चाहिन्छ तय गर्नुपर्छ। यसका लागि हामी तयार हुनुपर्छ। काम पनि त्यहीअनुसार अग्रसर भएर गर्छौं।
प्यानल बन्ने त चुनावमा सामन्य कुरा हो। तर महासंघको चुनावमा राजनीति बढी भयो भन्ने कुरा उठिरहन्छ। तर यो पालि अलि बढी भयो भन्ने छ । राजनीति बढी भएको कुरालाई तपाई मान्नुहुन्छ?
महासंघमा दुई प्रकारका मानिस छन्। एकथरी महासंघलाई ब्यापार बनाउछन्। अर्को व्यापारी हो तर महांघमा सेवा गर्नलाई गएका छन्। जो महासंघलाई प्रयोग गरेर व्यापार गरिरहेका छन् उनीहरु रहनुभएन। जो वास्तविक व्यवसायी हुन्। सबैको हकहितका लागि लाग्छन् उनीहरुले मात्र नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो। हाम्रो प्यानल जित्यो भने जुन व्यक्तीहरु महासंघलाई दुरुपयोग गरिरहेका छन् उनीहरु आउट हुन्छन्। अब जो वास्तविक व्यवसायी हुन् पवित्र इच्छाले काम गर्छन् त्यो प्यानल हाम्रो हो।
राजनीति हरेक संस्थामा हुन्छ। चुनाव भनेकै राजनीति पनि हो। तर हामी राजनीतिक संस्था होइन। हामी व्यावसायिक संस्था हो। महासंघलाई व्यवासय बनाउनेहरुले राजनीति गर्न पनि खोजे होलान् तर हामी व्यावसायिक सामाजिक
संस्थाका लागि सेवा गर्नलाई भएको चुनावलाई त्यही अर्थको राजनीति हुनुपर्छ भन्ने ठान्छौं। हाम्रो विश्वास भनेकै अनुचिति राजनीतिलाई परास्त गर्नका लागि हामीलाई भोट आउछ भन्ने हो।
राजनीति कसले गर्‍यो गरेन त्यो फरक कुरा भयो। तर महासंघको केन्द्रमा पुग्नेहरु सबैले व्यक्तिगत हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्छन् भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ। तपाई आफै पनि महासंघमा रहँदै आउनुभएको छ। के यो साँचो हो?
सबैलाई चित्त बुझाउन त गाह्रो हुन्छ। पवित्र इच्छा भएपनि सञ्चार प्रभावकारी हुन सकेन भने पनि केही भ्रम सिर्जना हुन्छन्। व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेका छन् भन्ने त मलाई लाग्दैन।
कहिलेकाही होला धेरैजसो निजी क्षेत्रकै हितका लागि लागि परेका छौ। तर हामीले यो कुरा बाहिर ल्याउन सकेनौं। काम गरिरेका छौं। तर त्यो बाहिर आउन सकेन। कहिलेकाही सल्लाह लिने कुरामा पनि अपुग भएको छ। अब यस्ता कमजोरी सुधार हुने छ।
तपाइको समूहलाई नाडा समूह पनि भन्ने गरिन्छ नि?
नाडा भनेको सबैभन्दा शक्तिशाली वस्तुगत संघ हो। सबै सक्षम व्यवसायीको एउटा विंग अटोमोबाइल हुन्छ। यो क्षेत्रले मात्र १६ लाखलाई रोजगारी दिएको छ। सबैभन्दा राजश्व तिर्ने क्षेत्र पनि हो। कूल २० प्रतिशत राजश्व त यही क्षेत्रले तिर्छ। सबैभन्दा पारदर्शी क्षेत्र पनि हो।
हामी जो पदाधिकारी प्रत्यासी छौ धेरै नाडाकै छौं। हामी अरु व्यवसायमा पनि छौ तर नाडाकै किन भन्छन्। म त स्टिलमा छु,अक्सिजन प्लान्ट छ। कृषिमा पनि छु। बैंकिङ र हस्पिटलमा म छु। तर पनि किन नाडामात्र सम्झिन्छन्। किन भने त्यसको वेट छ। हामी अन्य क्षेत्रमा पनि छौं। हामीलाई यही कारण उद्योग, सेवा,ट्रेडिङको अनुभव छ। यही कारणले बुझेका छौं। कहाँनेर अप्ठेरो परेको छ भने। व्यवसायीलाई बुझेका पनि छौं।
व्यापार गरिरहेको। पैसा कमाइरहेको तपाइजस्तो व्यवसायीलाई महासंघको राजनीतिमा जान केले आकर्षण गर्ने रहेछ?
राजनीति गर्नका लागि लागेको होइन। म तेस्रो पुस्ता हो हाम्रो परिवारमा। हाम्रो मान्यता भनेको आफ्नो मात्र विकास भयो भने अघि बढ्न सकिन्न। सँगै कर्मचारी,ग्राहक,समाज र राष्ट्रको विकास हुनुपर्छ भन्ने हो। देशको अर्थतन्त्र धरासायी भएपछि मेरो मोटरसाइकल कसले किन्छ? त्यसैले सबै अघि बढ्नुपर्छ सँगै।
सुरुदेखि नै आफ्नो नाफामात्र हामी हेर्दैनौ। समाजप्रति पनि जिम्मेवारी भएकाले यसमा के गर्न सक्छौ त भन्दा व्यवसयामा मात्र नभएर विभिन्न संघसंस्थासँग सहकार्य गरिकन काम गर्न सकिन्छ। नाडा होला, युवा उद्दमी फोरममा म थिए त्यहाँबाट मेड इन नेपाल क्याम्पियन गरेको थिए। त्यस्ता काम गर्दा अन्तत मलाई पनि फाइदा हुन्छ। बृहत्तर हितका लागि त्यस्ता काम गरिन्छ।
विभिन्न संस्थाले त्यस्तो फोरम दिएका हुन्। त्यस्ता ठाउँमा मैले पचास प्रतिशत समय दिने गरेको छु। त्यो भनेको चाहिएको र आवश्यक कुरा पनि हो।
हाम्रो पारिवारिक मान्यता र आफ्नो पनि फरक पहिचान हुन्छ त्यसबाट सन्तुष्टि मिल्छ भनेर आएको हुँ। समाजका लागि केही काम गर्न सकियो भने सन्तुष्टि त मिल्छ नि। पछिल्लो पुस्ताले पनि सम्झिन्छ। त्यो कदर पनि हो।
महासंघको चुनाव कत्तिको महंगो हुन्छ?
भाग्यवस अहिलेसम्म खर्चको अनुभुति भएको छैन। एशोसिएटको भएकाले सबै कम्पनीका नेतृत्व गर्ने सिइओ, एमडी र अध्यक्षहरु भोटर हुन्छन् यसमा। उहाँको भोट भनेको आफ्नो बुद्धि विवेक र आफैले निर्णय गरेर मेरो सही नेतृत्व हुनसक्छ भनेर दिने हो। व्यक्ति हेरेर दिने हो। यो क्षेत्रमा सबैले सबैलाई चिनेकै पनि छ। त्यो हिसाबले भोट आउने भएकाले अहिलेसम्म महासंघमा सबैभन्दा कम खर्च हुने उम्मेदार हुँ।
यो क्षेत्रमा बल्क भोट धेरै हुन्छ। तपाइको चुनावी गणित कस्तो छ?
यसमा एकदमै सामन्य छ। हाम्रो टिममा शेखर गोल्छा, अन्जन श्रेष्ठ र म आफै एउटै समूहमा छौं। हाम्रो समूहमा देशका प्रतिष्ठित समूहहरु पनि छन्। सदस्यहरु हेर्दा पनि थाहा हुन्छ। सदस्यकैमात्र भोटले बहुमत हुने अवस्था मेरो छ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, कात्तिक २७, २०७७, २३:२३:२९